Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ABSDF အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တွေ့ရန်ရှိ
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ABSDF အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တွေ့ရန်ရှိ	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၆ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ သည် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့၌ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထပ်မံ လာရောက်ရန် ရှိပြီး ၎င်းခရီးစဉ် အတွင်း ကျောင်းသား တပ်မတော် ABSDF၊ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများအားလည်း တွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးလှမောင်ရွှေ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“မနက်ဖြန်တော့ ကျနော်တို့တော့၊ ဦးအောင်မင်း အဖွဲ့ကတော့ ဗန်ကောက်၊ ချင်းမိုင်ကို သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) တို့နဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) နဲ့ တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အခြားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖြစ်မလဲ ဆိုတာတော့ တွေ့ပြီးမှပဲ ပြောပြနိုင်မှာပါ” ဟု ဦးလှမောင်ရွှေ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ယခု လာရောက် တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်သည်လည်း အလွတ်သဘောဟု ဆိုနိုင်သည့် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးလှမောင်ရွှေ က ဆိုသည်။သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှင့် အဖွဲ့သည့် သောကြာနေ့ နေ့လည်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆိုက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။KNPP နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားပြီး တွေ့ဆုံကြသည့်အခါ ဆွေးနွေးရန်ရှိသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ အောင်ဆန်းမြင့် က မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။“အခု အချိန်အထိ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ဌာနချုပ်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဦးအောင်မင်းတို့နဲ့ တွေ့ဖို့ကို အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ဘယ်နေ့ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ကို တိတိကျကျ အကြောင်းကြား လာသေးခြင်း မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ကတည်းက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုး ထားကြတုန်းက သဘောတူ ထားသည့် အချက် (၁၄) ချက်အား ပြန်လည် သုံးသပ် သွားရန် ဆွေးနွေးကြရန် ရှိကြောင်း” ဦးအောင်ဆန်းမြင့်မှ မဇ္ဈိမအား ပြောသည်။ထို ဇွန်လ အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ် သဘောတူထားသည့် အချက်များထဲမှ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွင် ကယားပြည်နယ် ထဲ၌ ရှိသည့် ဧည့်တပ်များ ဆုတ်ခွာပေးရန်၊ လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ထားရှိရေး၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအပေါ် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့များ ထားရှိရေး၊ ရွာသစ် ရေကာတာ စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရေး အပေါ်လေ့လာခွင့် ကိစ္စရပ်များ၊ ဖလူးဆိုး မြို့၌ တန်းမြင့် စစ်ရေး လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ရပ်တန့်ပေးပြီး လူထုအတွက် အကျိုးပြုမည့် အခြား စီမံကိန်း တခုခုအား ပြန်ပြောင်း ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုထားသည့် ကိစ္စရပ်များကို တင်ပြဆွေးနွေး သွားဖွယ် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ဖလူးဆိုး မြို့၌ အစိုးရက တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် တန်းမြင့် စစ်ရေး လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာမူ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်သည်ဟု ဦးအောင်ဆန်းမြင် က ပြောသည်။ABSDF နှင့် တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ် ရှိသည့်အပေါ် မဇ္ဈိမမှ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် “ကျနော်တို့နဲ့ ဦးအောင်မင်း တို့နဲ့ တွေ့ဖို့တော့ ရှိပါတယ်။ တွေ့ပြီးမှပဲ သဘောထားတွေကို ကျနော်တို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်မယ်လေ။ အခု ကြိုပြီး ပြောဖို့အတွက် ကျနော်တို့ဘက်မှာ သဘောထား မရှိပါဘူး” ဟုသာ ABSDF ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရဲဘော် မျိုးဝင်း က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ABSDF မှာ လက်ရှိအထိ အစိုးရအား လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်နေ၍ ထိုအပေါ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့၏ သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေ က “ကျနော့်ဘက်က ပြောလို့ရတာ လက်ရှိ ဦးအောင်မင်း ရှင်းပြတာကိုက ဒီငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုနဲ့ နိုင်ငံ ပြည်လည် ထူထောင်ရေး အစီအစဉ် (Peace Process and Nation Building) မှာ Stake Holder အကုန်လုံးကို သူတို့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီး အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တဆင့်ပြီးတဆင့် လုပ်သွားဖို့ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ကို ရှင်းပြထားပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသွား သည်။အစောပိုင်း၌ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) နှင့် တွေ့ဆုံကြရန် ရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ် ခဲ့သော်လည်း “ကျနော်တို့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ UNFC နဲ့ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် မရှိပါဘူး” ဟုသာ ဦးလှမောင်ရွှေ က ဆိုသည်။ဦးအောင်မင်းနှင့် ABSDF တို့မှာ အလွတ်သဘောအဖြစ် ဇွန်လလယ်ပိုင်းတွင် တကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်သည်။
KNPP နှင့် အစိုးရ သဘောတူညီမှု တချို့ရ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆွေးနွေးမည်	KNPP နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးမည်	ABSDF နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးမှု နှစ်ဘက်စလုံး အားရကျေနပ်မှုရှိ	ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးသည် ABSDF ၏ ဆန္ဒဖြစ်	ဦးအောင်မင်းနှင့် PNLO ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေးနွေးမည်	အစိုးရဘက်မှ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်နေဟု ABSDF ပြော	ABSDF ၏ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြည်တွင်း လေ့လာရေး ခရီးစဉ် စတင် Who is Online
We have 337 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved